Mamirapirata amin'ny ranom-boankazo mainty - Fomba Fanamboarana
akoho ala king mahandro mahandro resipeo
firy ny kaopy ao anaty vary iray kilao
aiza no ahitako fangaro mofomamy funnel
Ny vary masaka 1 kapoaka dia mitovy amin'ny maina
Mamirapirata amin'ny ranom-boankazo mainty
Ny famirapiratana ao anaty zava-pisotro maizina dia fanampin-javatra tonga lafatra amin'ny fetin'ny fahalavoanao amin'ity taona ity! Mora ny manao azy ireo ary ny ghoul kely rehetra amin'ny fiainanao dia ho tia azy ireo!
Glow in the Dark Skeleton Juice dia mocktail mahafinaritra sy mahatsikaiky hankafizanao ity Halloween ity! Mora atao amin'ny fampiasana akora tsotra toy ny grenadine, soda voasarimakirana sy rano tonika, ireo zava-pisotro ireo dia 'spook'tacularly matsiro koa!
Mahafinaritra tokoa ny fety Halloween! Miaraka amin'ny famoronana kely, ny Halloween manaraka anao (na ny anao koa Sakafo hariva ) afaka miala amin'ny fahafinaretana mankamin'ny fotoana mampatahotra! Tiako ny mampiantrano fety Halloween ary ny tsara indrindra dia any amin'ny fitsidihan'ny vahiny anao!
Izahay dia nametraka ny toe-tsaina tamin'ny jiro mainty sy vatosoa ary mazava ho azy ny lovia feno snacks azo raisina!
Tamin'ity taona ity, Butterfinger Peanut Butter Cups Skulls dia manana endrika vaovao mahavariana vaovao, ary feno ny butterfinger crispety, crunchety, peanut-buttery flavour. Tianay koa ny misambotra Jumbo Variety Bags an'ny Butterfinger, Nestlé Crunch, Baby Ruth, SweeTARTS, Nerds, & Laffy Taffy ho an'ny fety sy ho an'ny Trick na Fitsaboana kelinay! Afaka mahita ireo ianao Tavoahangy dibera dibera butterfinger amin'ny mpivarotra lehibe manerana ny firenena!
Ireo zavatra madinidinika ireo izay afaka mampiavaka manokana ny fetinao. izany Mamirapirata amin'ny ranom-boankazo mainty Tsotra ny fanamboarana ary ny tena mahasalama dia ny mololo mahery sy ny zava-misy fa manjelanjelatra ao anaty haizina!
Tsotra ny fanamboarana ny mololo! Manaraka tsotra izao ny Kamboaran-boanjo dibera Butterfinger isika amin'ny mololo misy sôkôla natsonika ary avela hangatsiaka!
Manaraka, manaingo tavoahangy mazava miaraka amin'ny taratasy fametaka mampihorohoro ary fenoy grenady, ranomandry ary rano tonika afangaro amin'ny soda sokay. Ampidiro ao anaty mololo mahatsiravina, atsipazo ny jiro maintinao ary misotro zava-pisotro mangatsiaka tsy mahafinaritra ianao!
Fa maninona no misotro ity zava-pisotro ity?
Inona no mahatonga an'io Mamirapirata amin'ny ranom-boankazo mainty mamirapiratra amin'ny maizina?
Ny rano tonika no mpamono olona mahatsiravina! Ny rano tonika dia misy kininina izay mahatonga azy io ho fluoresce manga mamiratra rehefa a hazavana mainty ultraviolet ampiharina aminy. Fomba tena tsara hanamboarana ny lanonam-pifaliana mahafinaritra!
Raha eo ianao, dia afaka manamboatra tsakitsaky manjelanjelatra hafa be dia be ho an'ny Halloween!
ovy nopetahana sy ham miaraka amin'ny lasopy akoho amam-borona
Mamirapiratra bebe kokoa amin'ny haizina sy ny sakafo Halloween
Ampio jiro mainty fotsiny ho an'ny fahafinaretana lafo vidy! Ho fanampin'ny famirapiratana ao amin'ireo petadrindrina maizina, ary ny haingon-trano manjelanjelatra dia azonao atao koa ny mampamirapiratra ny sakafonao!
Manampia rano tonika amin'ny tsindrin-tsakafo gelatin na koa ny lovia kapoakainao.
Mamorona salady mampatahotra amin'ny fampiasana menaka fandrahoan-tsakafo (mavo mamirapiratra) na menaka oliva (volomboasary mamirapiratra) ao anaty akanjo.
Ketchup (mamirapiratra mavo manjavozavo) dia fimailo mahafinaritra mahafinaritra an-tanana ho an'ireo mpikorisa mahatsiravina.
Izay fomba fahandro misy ronono (mavo mamirapiratra) dia ho mangatsiaka koa ny hazondamosiko! Ny milkshakes dia tsy hanome ny hatsiaka ny vahininao fa hampiakatra volo koa!
Ankafizo ity Halloween ity ary ampidiro ao anaty menio fety anao ny Glow in the Dark Skeleton Juice! Ny fianakavianao sy ny vahininao dia ho tia tanteraka ny fifangaroanao!
Mamirapiratra amin'ny zava-pisotro maizina
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana manontolo5 minitra Fanompoanairay Nanompo MpanoratraHolly Nilsson Zava-pisotro mahatsiravina mahatsiravina hanompo amin'ny fety Halloween manaraka! pirinty Pin
▢rOA tablespoons Ranom-boankazo na voankazo
▢¼ kapoaka rano tonika
▢¾ kapoaka Soda sakamalao na voasary makirana
Apetraho eo ambanin'ny vera na tavoahanginao ny ranom-boankazo.
Fenoy ranomandry ny vera na fitoeranao.
Atambaro ny rano tonika sy ny sakamalao. Araraka moramora ny ranomandry (ka mihidina ny ranomandry nefa tsy manelingelina ny ranom-boankazo.
Alefaso ny jiro maintinao ary mankafiza!
Kaloria:138,Karbohidraty:35h,Sodium:51levitra,Sugar:35h,Vitamina C:2.8levitra,Kalsioma:iraika ambin'ny fololevitra,Vy:0.7levitra
Teny lakilemamirapiratra amin'ny fisotroana maizina Mazava ho azyzava-pisotro masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Hevitra tonga lafatra amin'ny antoko Halloween:
Alefaso a fanasana Halloween mahatsikaiky ! Tiako ny manonta ny antsipirian'ny fety toy ny fotoana, toerana hipetrahana sns ... rehetra misy lohahevitra manaitra. Azonao atao ny manao ny taratasy ho antitra amin'ny fanosehana dite mahery amin'ny taratasy ary avelao ho maina. Raha vantany vao maina dia azonao atao ny manonta ny fanasana amin'ny taratasy, avy eo potipotehina mandrava ny sisiny na mandoro ny sisiny mihitsy aza.
Mangatsiatsiaka sy mahatsiravina Mozika Halloween ! Mametraka tanteraka ny feon'ny fety anao ny mozika. Mamorona fangaro mozika fantatrao fa ho tian'ireo vahininao.
Haingo ! Makà fotoana kely ary haingo ny tokotanao sy ny tranonao, hankafy azy tanteraka ireo vahininao!
Lalao na asa tanana ! Indrindra raha manana ankizy ao amin'ny fety ianao, manana karazana lalao na asa tanana hevitra tsara! Ny fananana hetsika dia manampy amin'ny fihazonana ilay antoko ho mahaliana, mahafinaritra ary mety ho mpandroba ranomandry be indrindra raha manana vahiny tsy mifankahalala.
eFA loka ho an'ny lalao ary aza adino ny loka ho an'ny akanjo tsara indrindra!
Sakafo sy zava-pisotro mahery fatratra dia ilaina amin'ny fety lehibe! Ary zava-pisotro iray mora sy matsiro izay ho tian'ny olon-dehibe sy ny ankizy dia ity Mamirapirata amin'ny ranom-boankazo mainty ! Fanampiny mahafinaritra ho an'ny fety anao izany!
Ity dia resadresaka nanohana ahy nosoratako tamin'ny anaran'ny Nestlé. Ny hevitra sy ny lahatsoratra dia ahy avokoa.